अस्ट्रेलियाले ४–० ले जित्यो एशेज सिरिज, अन्तिम म्याचमा इनिङ अन्तरले विजय
काठमाडौं, २४ पुस — अस्ट्रेलिया र इंग्ल्यान्डबीचको प्रसिद्ध एशेज टेस्ट क्रिकेट शृंखला अस्ट्रेलियाले ४–० ले जितेको छ ।
पाँचौं तथा अन्तिम टेस्टमा अस्ट्रेलिया एक इनिङ र १२३ रनको विशाल अन्तरले विजयी भएको हो ।
इंग्ल्यान्डले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै ३४६ रन बनाएकोमा अस्ट्रेलियाले सात विकेटको क्षतिमा ६४९ रनको विशाल स्कोर बनाउँदै डिक्लेयर ग–यो । अस्ट्रेलियालाई फेरि ब्याटिङ गराउनका लागि ३०३ रन बनाउनुपर्ने इंग्ल्यान्ड जम्मा १८० रनमा अलआउट भयो ।
इंग्ल्यान्डको ब्याटिङ लाइनअपलाई प्याट कमिन्सले ध्वस्त पार्दै चार विकेट हात पारे । पहिलो इनिङमा पनि चार विकेट लिएका कमिन्स म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
अस्ट्रेलियाको एक मात्र ब्याटिङ इनिङमा तीन ब्याट्स्म्यानले शतक बनाए । उस्मान खवाजाले १७१, शन मार्शले १५६ र मिचेल मार्शले १०१ रन बनाए । कप्तान स्टिभन स्मिथले ८३ रन बनाए । कप्तान स्मिथले शृंखलाभरि राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन गरेकाले म्यान अफ द सिरिज भए ।
चौथो टेस्ट बराबरीमा टुंगिएबाहेक अन्य सबै खेलमा इंग्ल्यान्डले खराब प्रदर्शन ग–यो । चौथो टेस्टमा केही सुदृढ प्रदर्शन गरेर आशा जगाएको इंग्ल्यान्डले अन्तिम टेस्ट लज्जास्पद प्रदर्शन ग–यो ।
ईपीएलमा आज भैरहवा र विराटनगर तथा काठमाडौं र ललितपुरबीच प्रतिस्पर्धा हुने
‘ए’ डिभिजन लिग : सातौं चरणका खेल सकिए, मनाङ शीर्ष स्थानमा कायमै
अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्टमा भारत विजयी, शृंखलामा १–० को अग्रता
ईपीएल : आज दुई खेल हुँदै
‘ए’ डिभिजन लिग : आज आर्मी र ब्रिगेड ब्वाइज भिड्दै
२०१९ को चुनावअघि खतरामा मोदी ‘ब्राण्ड’ ! मोहित ग्रोबर हिन्दी क्षेत्रको तीन ठूला राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ तथा मध्य प्रदेशमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले पाएको हारले ‘ब्राण्ड मोदी’ माथि झट्का लागेको छ । ...
प्रदेश पाँचको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि
‘यात्रा’को डबिङमा सलिनमान, भन्छन् –‘दोस्रो चलचित्रमा आफूलाई अझै परिपक्क बनाउँदैछु’
कपिल शर्माको विहे आज, सामाजिक सञ्जालमा लाइभ हेर्न पाइने !
देउवाले समय मागेपछि संवैधानिक परिषद् बैठक फेरि स्थगित